Maitiro ekuisa uye kumhanyisa Linux pane Android | Linux Vakapindwa muropa
Android uye GNU / Linux vanogovana akawanda maficha, kutanga nemusoro wayo uye imwe dhairekitori uye dhizaini dhizaini, yatinogona kutaura kuti kune nhanho inonakidza yekuenderana. Izvo zvinova zvinoreva kuti isu tinogona kuve neakawanda kwazvo akazara desktop kupfuura iyo inopihwa neyedu mafoni uye mahwendefa, chimwe chinhu chiri padhuze nezvatinazvo mumakomputa edesktop edu zuva nezuva kuitira kuti vawedzere kugona kwavo.
Ticharatidza maitiro ekuisa Linux pane Android chishandiso, uye chakanakisa pane zvese, maitiro asiri eakaipisisa chete asiwo inogona kuitwa pasina kukosha kwekuwana midzi. Isu tinotaura chinhu chiri nyore nekuti iwe unongofanirwa kuisa maviri mafomu, atinozotora kubva kune yepamutemo Play Store: GNURoot Debian y XServer XSDL. Yekutanga ndiyo inowedzera nharaunda (zvine musoro zvichibva pane yakakurumbira distro) uye yechipiri ndiyo inotipa X server pane Android.
Saka ngatitangei kushanda, uye nekuda kweizvi tinoenda kuchitoro cheApple chekushandisa uye nekuisa GNU Root Debian, wobva wadzokorora maitiro uye nekuisa XServer XSDL.
Isu tinoita GNURoot Debian, uye isu tinomirira apo nharaunda Debian inozvidzora-yega uye inotangisa, chimwe chinhu chinogona kutora maminetsi matatu kana mana zvichienderana nesimba rehardware matiri kushanda. Kana isu tikaona yekuraira Prompt neshoko rekuti 'mudzi' zvinoreva kuti isu tinokwanisa kutora inotevera nhanho.
Isu tinoita mirairo
kugadzirisa yedu mini Debian kune yayo yazvino mamiriro.
Kana izvo zvapera, isu tiri muchinzvimbo chekutarisa pane yakajeka nharaunda. Uye yekombuta inongova ne1 GB kana pamwe 2 GB ye RAM ndangariro, uye izvo zvakare zvinoramba zvichimhanyisa iyo nharaunda yeApple mukuwedzera kune ino inotinetsa izvozvi, chakanakira chinhu chakareruka senge LXDE. Tinoriisa pamwe nemurairo
Isu tinoisa mamwe maapplication akadai se XTerm terminal emulator, Pulseaudio odhiyo server uye Synaptic graphical chishandiso:
Iye zvino isu tinongofanirwa kutanga XServer XSDL, mushure mezvo isu tinomirira mamwe mapakeji enzvimbo kuti atorwe, tobva tadzokera kuGNURoot kuita:
Ndizvozvo, tinogona kuchinjira kuXServer XSDL uye tione matangiro ainoita graphical nharaunda yatichanyatso ziva zvizere. Iye zvino tinogona kumhanya nemaapplication akaita seFirefox, GIMP nemamwe, kana kuisa mamwe maapplication kubva kuSynaptic, tichigara tichifunga kuti isu tiri munzvimbo yakati rebei (semuenzaniso, hatina 3D yekumhanyisa mitambo) asi izvo kunyangwe izvi zvichatibvumidza kuita zvirinani mabasa ese ezuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuisa uye kumhanyisa Linux pane Android
Iyo nzira, asi ini ndinofarira LinuxDeploy, iyo inokutendera iwe kuti uise akawanda ekugovera uye kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinhu, zvakare inokutendera iwe kuti ushandise iyo graphical nharaunda kuburikidza nefreybuffer, iyo inopa kuita kuri nani kuita. Iyo yakanaka kune chero chinhu cheApple chinobatana neTV / tarisiro uye iwe unoisa keyboard uye mbeva, kuti igone kushandiswa senge yakajairwa komputa (LibreOffice, browse ...)
kumhanya pamoto g3
Pindura kuna Stiven
Quote XDA, vanyori veichi chinyorwa vakapotsa vanyatso dudzira, hausi wakaderera pane izvo, asi zvimwe.
Andres: Inotendera LinuxDeploy kuisa pane chishandiso isina midzi?.
Iyi nzira inoita senge yakanaka kwandiri, nekuti haidi midzi; zvakare maapplication maviri akarodha pasi, nhanho dzinoverengeka uye ndizvozvo; yakakosha kune vanotanga vashandisi.
Pindura kuna mrmartinezti
Martin sanchez akadaro
rookie mubvunzo, kutsiva Android?
Pindura Martin Sanchez
Iye akati isu takaisa LXDE ye RAM, pamusoro payo Android inomhanya. Saka kwete.
Unogona kuisa pentester yekuyedza app?
Dellfor Masvingo akadaro
pane izvo iwe unofanirwa kumisikidza kali nethunter kune yako nhare :)
Pindura Dellfor Paredes
Ini ndaita iyo yekumisikidza asi yanga isina kuita zvachose. Zvinonyadzisa Ndakazviita pahwendefa. Iwe unofanirwa kubatanidza keyboard kune iyo piritsi kuti ukwanise kuishandisa? Kwaziso kubva kune super-newbie
pane izvo iwe unofanirwa kuisa kali nethunter kune chako chishandiso ... :)
Kwazisai, ndatenda ketsamba, ini ndine mubvunzo ...
Ndakaedza kuishandisa pane yangu yekare Motorola Razr ini mbozhanhare asi kana ndichigadzirisa application ne "apt-tora kugadzirisa" uye "apt-tora kusimudzira" zvinondiudza "apt-tora: kuraira hakuwanikwe", pane chero munhu anoziva kuti ini unogona kuzvigadzirisa?
Wakaedza here kungoisa apt wega, pasina iyo "-get"? zvinoti:
"Kuvandudza patsva" uye "apt kusimudzira"
mhoro shamwari; ita matanho ese asi gara padanho 6, ini ndinowana meseji ye "haigone kuvhura kuratidza". Unogona kundibatsira kugadzirisa dambudziko iri?
Pandinoisa export DYSPLAY, inova yekupedzisira nhanho, inongowoneka  uye mashanu manhamba, chii chandinofanira kuita mushure mekupedzisira nhanho kana sekutanga?
Mhoro uye kubvisa zvese? Ndatenda
Albert M. akadaro
Pindura kuna Alberto M.
kanganwa icho, ndachiwana, ndatenda zvikuru uye ndiregerere
Padanho rekupedzisira pandinoisa kunze kwenyika RATIDZA uyezve PULSE_SERVER uye ini ndinopinda Xserver asi ini ndine yeblue screen ine mamwe mavara NDINOITII? NDINOKumbira rubatsiro
Mhoro mushure mekuvandudza (zvakatora rinenge awa pahwendefa hombe) ini ndinoona kuti ndiri seyakajairika mushandisi, ini handizive chinonzi password password kuisa mashandisiro. Chimwe chinhu ndechekuti zvirongwa zvekutanga senge ls, cal apt vi, zvinondiudza
sh /: ls: haina kuwanikwa
Saka haina kuiswa? Ini ndinofunga kudaro asi handizive kuti dambudziko nderei. Mumwe anondibatsira ndapota.
(Usaise graphical nharaunda ini handifarire)
Pindura kune nyeredzi
ZvePARROT Chengetedzo 2019?
SUSE Nyanzvi Mazuva muMadrid, Seville neBarcelona